ဒရဂွန်ကျူလီအေးစစ် - ဝီကီပီးဒီးယား
လူတစ်ဦး၏ ခြေထောက်မှ ဂီနီသန်ကောင်ကို မီးခြစ်ဆံသုံး၍ ထုတ်ဖယ်နေပုံ
ကူးစက်ရောဂါ, helminthology, tropical medicine
၁ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် ရောဂါအသွင်အပြင်
၃ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ကုသခြင်း
၄ ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း၊ ကူးစက် ပြန့်ပွားမှု နှင့် ရောဂါသမိုင်း
ဒရဂွန်ကျူလီအေးစစ် ခေါ် ဂီနီသံကောင်ပိုးရောဂါ (အင်္ဂလိပ်: Dracunculiasis or guinea worm disease; အတိုကောက် GWD) သည် ဂီနီ သန်ကောင်ပိုး ဖိစီးသော ကူးစက်ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဂီနီသန်ကောင်ပိုးလွှားများဖြင့် ညစ်ပတ်ကူးစက်နေသော ရေဖြုတ် အလှေးကောင် များပါသည့်ရေကို လူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ သောက်မိလျှင် ယင်းရောဂါ ကူးစက်သည်။
ဖြစ်စတွင် မည်သည့် ရောဂါလက္ခဏာ အသွင်အပြင်မျှ မပြချေ။  တစ်နှစ်ခန့် ကြာသောအခါ အမ ဂီနီသန်ကောင်ပိုးသည် ထိုလူ၏အသားတွင် ရည်ကြည်ဖုနာ ဖြစ်စေကာ ထိုသူသည် အထူးသဖြင့် ခြေထောက်များတွင် ပူလောင်နာကျင်မှု စတင်ခံစားလာရသည်။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ် ကြာသောအခါ သံကောင်သည် အသားတွင်းမှ ထွက်လာသည်။ ယင်းအချိန်အတွင်း လမ်းလျှောက်ရန် သို့မဟုတ် အလုပ် လုပ်ရန် အခက်အခဲရှိနိုင်သည်။ ရောဂါကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးရမှုသည် အလွန်ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ ဖြစ်သည်။   
သိရှိရသလောက် ဂီနီသန်ကောင်ပိုးကူးစက်ဖြစ်ပွားကို လူသားတွင် မှတစ်ပါး အခြားမည်သည့် သတ္တဝါတွင် မတွေ့ရှိရပေ။ သန်ကောင်သည် အနံ တစ်(၁)မီလီမီတာမှ နှစ် (၂)မီလီမီတာခန့် ရှိပြီး အရွယ်ရောက်အမ များသည် (၆၀)မှ (၁၀၀) စင်တီမီတာအထိ ရှည်လျားတတ်သည် (အထီးများသည် အမများထက် များစွာ တိုသည်။) လူသား၏ပြင်ပတွင် ဥများသည် ရက်သတ္တသုံးပတ်အထိ အသက်ရှင်နေနိုင်သည်။ ယင်းအချိန်မကုန်ဆုံးမီ သူတို့ကို ရေဖြုတ် အလှေးများမှ စားရမည်။ ရေဖြုတ်များအတွင် ပိုးလောက်လမ်းများသည် လေးလအထိ အသက်ရှင်နေနိုင်သည်။ ဤသို့အားဖြင့် ရောဂါသည် ဒေသတစ်ခုအတွင်း ဆက်ဖြစ်နိုင်ရန် နှစ်စဉ် လူသားအတွင်း ဖြစ်ပေါ်ရန်လိုသည်။ အများအားဖြင့် ရောဂါ ၏ လက္ခဏာ နှင့်အသွင်အပြင်များအပေါ်အခြပြု၍ ရောဂါကို ခွဲခြားသုံးသပ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
ရောဂါကို စောစီးစွာ ခွဲခြားသုံးသပ် သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ လူနာ၏ အနာကို သောက်သုံး(နိုင်သည့်)ရေနှင့်အထိတွေ့မရောက်ရှိစေခြင်းတို့ဖြင့် လည်းကောင်း ရောဂါကို ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်သည်။ အခြားကြိုတင်ကာကွယ်နည်းတို့တွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်။ ရေသန့်ရရှိရေး သို့မဟုတ် ရေကို မသန့်လျှင် စစ်ယူခြင်း အစရှိသဖြင့် လည်း ရောဂါကို ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်သည်။ အများအားဖြင့် ရေစစ်ဖြင့်စစ်ယူခြင်းနှင့်ပင် လုံလောက်ပေသည်။
ပိုးလောက်လန်းကို သတ်ရန် temefos ခေါ် ဓာတုပစ္စည်းသုံး၍ မသန့်စင်သောရေကို သန့်စင်စေနိုင်သည်။ ရောဂါ ကာကွယ်ကုသရန် ဆေးဝါးသော်လည်းကောင်း၊ ထိုးဆေးသော်လည်းကောင်း မပေါ်သေးပေ။ သန်ကောင်ကို ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာခန့်တွင် သေးငယ်သောတုတ်ချောင်းတစ်ခုဖြင့် ရစ်ပတ်လှိမ့် ယူခြင်းဖြင့် ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ သံကောင်ဖေါက်ထွက်လာ၍ ဖြစ်လာသော အာနေသောအနာသို့ ဘက်တီးရီးယားပိုးများ ကူစက်လာနိုင်သည်။ သန်ကောင်ကို ထုတ်ပြီးသည့်နောက် လအတန်ကြာသည်အထိ ဆက်လျက်နာနိုင်သည်။
ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း၊ ကူးစက် ပြန့်ပွားမှု နှင့် ရောဂါသမိုင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း ရောဂါဖြစ်ပွားမှု (၁၄၈)မှု ရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ယင်းသည် ၁၉၈၆ခုနှစ်တွင် ရောဂါဖြစ်မှု (၃.၅)သန်းမှ ကျဆင်းလာမှုဖြစ်သည်။ ၁၉၈၀-၈၉ အတွင်း နိုင်ငံ ၂၀ ခန့်တွင် ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဖြစ်ပွားမှု အများဆုံးနိုင်ငံသည် တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ ကပ်ပါးသံကောင်ရောဂါများတွင် ရောဂါ မျိုးဆက် ပျောက်ပျက်အောင်ကုသနိုင်သော ပထမဦးဆုံးရောဂါဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
ဂစ်နီသန်ကောင်ရောဂါသည် ရှေးပဝေသဏီထဲကပင် ရှိခဲ့သည်။ ခရစ်တော်မပေါ်မီ နှစ် ၁၅၅၀ ခန့်ကပင် အီဂျစ်ဆေးကျမ်းတွင် ဖော်ပြထားရှိသည်။ Dracunculiasis သည် လက်တင်စကား နဂါးလေးများဖြင့် ဖိစီးစောရောဂါ မှ ဆင်းသက်လာပြီး ""ဂီနီသန်ကောင်""ဟူသောဝေါဟာရသည် ၁၇ရာစုတွင် ဥရောပတိုက်သားများသည် တောင်အာဖရိကရှိ ဂီနီဆိပ်ကမ်းတွင် တွေ့ရှိမှုမှ စတင်ခဲ့သည်။ ဂီနီကပ်ပါးသန်ကောင်များနှင့် အနည်းငယ်တူသော မျိုးစိတ် (Species)တစ်မျိုးသည် အခြားသတ္တဝါများတွင် ဖြစ်ပွားသည်။ ယင်းတို့သည် လူသားသို့ကူးစက် ထိခိုက်သည်ကို မတွေ့ရှိရပါ။ ယင်းကို လစ်လျူအရှုခံနေရသော အပူပိုင်းဒေသဆိုင်ရာရောဂါ (neglected tropical disease) ဟူ၍ ပိုင်းခြား ခေါ်ယူသတ်မှတ်နိုင်သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ Greenaway, C (Feb 17, 2004). "Dracunculiasis (guinea worm disease).". CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne 170 (4): 495–500. PMID 14970098.
↑ Cairncross, S (Jun 2012). "Why is dracunculiasis eradication taking so long?". Trends in parasitology 28 (6): 225–30. doi:10.1016/j.pt.2012.03.003. PMID 22520367.
↑ Junghanss၊ Jeremy Farrar, Peter J. Hotez, Thomas (2013)။ Manson's tropical diseases. (23rd edition ed.)။ Oxford: Elsevier/Saunders။ p. e62။ ISBN 9780702053061။ CS1 maint: extra text (link)
↑ Parasites - Dracunculiasis (also known as Guinea Worm Disease) Eradication Program။ CDC (November 22, 2013)။ 19 March 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဒရဂွန်ကျူလီအေးစစ်&oldid=701920" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၆:၄၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။